Ny antsipiriany voalohany amin'ny terminal an'ny Project Tango an'i Lenovo | Androidsis
Tafaporitsaka ny antsipiriany voalohany momba ny telefaona an'i Project Lenovo Tango
Tamin'ny fiandohan'ny taona, ao amin'ny CES 2016, Nanambara tamin'ny fomba ofisialy i Lenovo ny fifanarahana nataonao tamin'i Google hitondra Projet Tango amin'ny fomba izay miteraka ny besinimaro. Izao dia rehefa namoaka antsipiriany momba ity fitaovana vaovao ity i Evan Blass, iray amin'ireo mpampahalala vaovao be indrindra.
Araka ny filazan'i Evan, ny Lenovo PHAB2 Pro no fitaovana voalohany an'ny Project Tango an'ny orinasa. Tsy dia nozaraina firy ny momba ilay terminal, saingy eny Evan no namoaka ny habeny ny terminal misy 6,4 santimetatra ho an'ny efijery. Refy mitovy amin'ny nolazain'i Google tamin'ny androny tamin'ny 6,5 santimetatra.
Tamin'io andro io rehefa niresaka momba ny haben'ny efijery an'ity fitaovana ity i Google, dia noheverina tamin'ny ankapobeny fa ny terminal dia milatsaka mihoatra ny habeny, fa amin'ny farany dia iray santimetatra ny fahasamihafana. Tsy misy zavatra hafa fantatsika ankoatry ny vidin'ny fanovozan-kevitra, na dia mbola tsy voamarina aza izy io latsaky ny 500 dolara.
Ho an'ireo izay tsy vaovao amin'ny Project Tango, ny mampiavaka azy dia ny fampiasana sensor sy fakantsary maro an'isa sarintany ny habaka manodidina ny mpampiasa amin'ny fotoana tena izy. Ny sasany amin'ireo fampisehoana navoakan'ny Google dia misy ny teknolojia afaka mandrefy efitrano sy mametraka fametrahana fanaka virtoaly amin'ny toerana mety ho efitranon'ireo mpampiasa. Anisan'ireo fiasa ampiasain'ny teknolojia misy azy ny fahaizana mamorona sarintany 3D amin'ny toerana anatiny.
Ao amin'ny Lenovo Tech World 2016 izy io, amin'ny faran'ny herinandro fotsiny izao, avy amin'ny toerana azontsika atao zarao ny antsipiriany misimisy momba ny PHAB2 Pro hahazoana hevitra tsara kokoa momba ny karazana fitaovana misy azy, ny fitaovana ary ny sisa amin'ny antsipiriany. Farafaharatsiny mba ho fantatsika hoe inona no fitaovana an'ity karazana ity afaka manompo antsika izay tsy dia mahazatra loatra ho an'ireo finday avo lenta sy takelaka mahazatra antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Tafaporitsaka ny antsipiriany voalohany momba ny telefaona an'i Project Lenovo Tango
Ny fakantsary Xperia X dia mijaly noho ny bibikely izay mahavita manafana be ilay terminal
NeoWars dia manolotra RTS miorina amin'ny node izay tsy maintsy handresena ireo planeta